Brexit – ဗြိတိန် အနေနဲ့ သဘောတူညီချက် မရဘဲ အီးယူကနေ နုတ်ထွက်မလား မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်မယ်
Brexit – ဗြိတိန် အနေနဲ့ သဘောတူညီချက် မရဘဲ အီးယူကနေ...
13 มี.ค. 2562 - 16:15 น.
ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာမေက ဒုတိယအကြိမ် တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ဥရောပ သမဂ္ဂ (EU) ကနေ နုတ်ထွက်ရေး သဘောတူညီချက်ကို ဗြိတိန်လွှတ်တော်က ထပ်မံ ပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မတ်လ ၂၉ ရက် ရက်ကျရင် သဘောတူညီမှု မပါဘဲ ဗြိတိန် အနေနဲ့ အီးယူကနေ နုတ်ထွက်တာကို ခွင့်ပြု၊ မပြုကို ပါလီမန် အမတ်တွေက မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ ရှိပါတယ်။
မတ်လ ၁၂ ရက် (အင်္ဂါနေ့) ညပိုင်းက ဗြိတိန်ပါလီမန်မှာ ဝန်ကြီးချုပ် မေ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ သဘောတူညီချက်ဟာ ထောက်ခံမဲ ၂၄၂ မဲ၊ ဆန့်ကျင်မဲ ၃၉၁ မဲနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။
မတ်လ ၁၃ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မှာတော့ သဘာတူညီမှု မပါဘဲ အီးယူကနေ နုတ်ထွက်နိုင်ခြေ အတွက် ဆွေးနွေး ကြမှာ ဖြစ်ပြီး အိုင်ယာလန် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်မှု အဆိုပြုချက်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေ အပေါ် သွင်းကုန်ခွန် သတ်မှတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လမ်းညွန်ချက်တွေကို အစိုးရက ထုတ်ပြန်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ စတင်နေပါတယ်။
ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာမေ အစိုးရဟာ ဇွန်ဘီအစိုးရလို့ လေဘာခေါင်းဆောင် ခေါ်ဆို
ဝန်ကြီးချုပ် မေ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ သဘောတူညီချက် ဒုတိယအကြိမ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အတွက် သဘောမတူညီမှု မပါဘဲ နုတ်ထွက်ရေး အစီအစဉ်တွေက ပိုပြီး အရေးကြီးလာပြီလို့ ဥရောပ သမဂ္ဂ (အီးယူ) က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလတုန်းက ဝန်ကြီးချုပ်မေ တင်သွင်းတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ဗြိတိန် လွှတ်တော်က ပထမအကြိမ် ပယ်ချခံခဲ့ရလို့ မစ္စမေက အီးယူနဲ့ ထပ်ညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူညီချက် အသစ်ကို ပြင်ဆင် တင်ပြခဲ့ပေမယ့် ထပ်မံ ပယ်ချခံခဲ့ရတာပါ။
အခုလို လွှတ်တော်မှာ ဒုတိယအကြိမ် ၁၄၉ မဲ ကွာခြားချက်နဲ့ ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာ အပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း အီးယူ ခေါင်းဆောင် အများအပြားက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
မဲရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် မေကလည်း ပါလီမန် မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်အနေနဲ့ ဥရောပ သမဂ္ဂ ကနေ သဘောတူညီချက်နဲ့ စနစ်တကျ နုတ်ထွက်နိုင်တာကသာ အကောင်းဆုံး ရလဒ် ဖြစ်မယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ ဆက်လက် ယုံကြည်နေပြီး အခု အီးယူ နဲ့ ညှိနှိုင်းထားတဲ့ သဘောတူညီချက်က အကောင်းဆုံး သဘောတူ ညီချက် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း မစ္စမေက ဆိုပါတယ်။
အယုံအကြည်မရှိ အဆို ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာမေ ၁၉မဲ နဲ့ ကပ်နိုင်
ဘရက်ဇစ် သဘောတူညီချက် ပါလီမန်က ပယ်ချ
ဗြိတိန် အနေနဲ့ သဘောတူညီမှု မယူဘဲ အီးယူကနေ နုတ်ထွက်မလား ဆိုတာကိုတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာ လွှတ်တော်က မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ကြမှာပါ။ တကယ်လို့ ဒါကိုလည်း ငြင်းပယ်ခံရရင် လာမယ့် ကြာသပတေး နေ့မှာ ဘရက်ဇစ် (Brexit) လို့ အတို ကောက် ခေါ်တဲ့ ဗြိတိန် အီးယူကနေ နုတ်ထွက်ရေး အစီအစဉ်ကို ယာယီ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်ဖို့ စီစဉ်ရမှာပါ။
ဒီလို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်ဖို့က ဥပဒေ အရ တရားဝင် နုတ်ထွက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အဓိက ကျတဲ့ အီးယူကို စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ လစ္စဘွန်း သဘောတူ စာချုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ အပိုဒ်ခွဲ ၅၀ ကို ထပ်မံသက်တမ်းတိုးဖို့ လိုပါမယ်။
နုတ်ထွက်မယ့် ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းဖို့က "ယုံကြည်လက်ခံနိုင်တဲ့ အကျိုးအကြောင်း တင်ပြချက်" ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်လို့ အီးယူဘက်က ပြောထားပါတယ်။
ဗြိတိန် အနေနဲ့ အီးယူကနေ နုတ်ထွက်ရမယ့် နေ့ဟာ တရားဝင် အကြောင်းကြား ပြီးချိန်ကနေ နှစ်နှစ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် လာမယ့် မတ်လ ၂၉ ရက် ယူကေ အချိန် ည ၁၁ နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ရက်ထပ်တိုးချင်ရင်တော့ အီးယူ အဖွဲ့ဝင် ၂၈ နိုင်ငံ စလုံးရဲ့ သဘောတူညီမှုကို ရရှိဖို့ လိုပါတယ်။
နုတ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက် ဥရောပရေးရာ အပါအဝင် အပြောင်းအလဲ လုပ်ဆောင်စရာတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ ကြားကာလ ကိုတော့ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ အထိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ Brexit – ဗြိတိန် အနေနဲ့ သဘောတူညီချက် မရဘဲ အီးယူကနေ နုတ်ထွက်မလား မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်မယ်